PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-12-06 - Liyokufuna abalandeli eLesotho igatyana laseBhayi
Liyokufuna abalandeli eLesotho igatyana laseBhayi
Isolezwe lesiXhosa - 2018-12-06 - IINDABA - MPUMELELO MATWA
LIBHENELE kwiintaba zaseLesotho ngeenjongo zokwandisa abalandeli igatyana laseBhayi.
ULefa Mosea (31) ongumdlalixilongo elibizwa ngokuba yiSaxophone nenkokeli yeqela lomculo weJazz, uncokole nentatheli yeli phephandaba esithi uya kweli lizwe eyokuzazisa ubukho bakhe kwicala lomculo.
Uthe ukhethe ukukhenkethela kweli lizwe nanjengoko umculo wakhe ukekelele kwicala lolwimi lwakhona, ezeka mzekweni emva kwamagqala afana nooTsepo Tshola, Nana Coyote neSankomota.
“Ndiza kudlala mahala ndingahlawulwa kwiindawo ezimalunga nesithandathu kuba abaququzeleli bayoyika ukuthengisela abantu amatikiti ngelithi andikaziwa, ndiyaqala nokuya kudlala kwiindawo zabo. Ngethamsanqa ke ndinenkxaso endiyizuze kwabakwaConcert SA eyenze kwaba lula ukukhenkethela apho,” utshilo.
Uqhube wathi ukungahlawulwa kokudlala kwakhe kwezo ndawo akumkhathazi nakancinci kuba uzuze nethuba lokuzazisa ezizweni, esithi uzithembile ukuba uyakubanika uncuthu mazangwa oluya kubenza ukuba bangaze bamlibale.
Uthe inqabe kakhulu inkxaso yeemvumi ezilokishini, watsho esithi abantu baphelela kule ndawo bebekubone kuyo bangayilandeli imvumi nangona bebewonwabele umculo wayo ngelo xesha. UMosea lo yinzalelwane yasePitoli kodwa ngoku uzinze kweli laseMambozana kwilokishi yaseZwide.
Unemfundo enomsila kwizifundo zomculo (Bmus.Ed) Uthe waqala ukuzimisela emculweni ngethuba wayefunda kumabanga aphakamileyo ehamba isikolo sabucala phantsi kwegqala lomculo wevangeli uBabalo Nqomfa. Emva koko wazifaka phantsi kwephiko lelinye igqala, uVusi Mahlasela, efunda isigingci.
Uhambe edlala neTake Note, ukhe wabonwa edlala noSibongile Khumalo, uMXO, Camagwini, Sliq Angel noMobi Dixon.
Ukhuphe ingoma enye ethi ‘‘Mabele’ esele idlalwa kuMhlobo Wenene nabanye oonomathotholo abakhulu, esithi kungoku nje uxakeke nenye eza kuba neengoma ezilishumi elinesithandathu, esithi iNews Cafe yaseBoardwalk nayo iyamsebenzisa kwiinkqubo zayo zeJazz Sunday ngentsimbi yesithandathu malanga.